Haya,adda GAA oo Qalab Ciyaareed ku Wareejisay Jaamacadda Burco | Samatar's Weblog
Haya,adda GAA oo Qalab Ciyaareed ku Wareejisay Jaamacadda Burco
Burco (samatar)- Haya,adda German Agro Action (GAA), ayaa qalabka ciyaaraha guddoonsiiyay masuuliyiinta Jaamacadda Burco, kaasoo loogu talagalay inay ka faa,iidaystaan Aradayada wax kabarta Jaamacadda.
Munaasibaddii wareejinta qalabkan ciyaaraha ayaa waxa hadalo kooban ka jeediyay Mubarak M. Cumar oo ka mida saraakiisha hayâ,adda GAA, waxaanu uu sheegay in aanay ahayn markii ugu horaysay ee Hayâ,ada German Agro Action siiso qalab ciyaareed dhallinyarada reer Burco, balse ay dhawr jeer oo hore u qabiyeen dhalinyarada ku nool Burco iyo Oodwayne iminkana ay ku soo biirtay Jamacada Burco oo aanu manta ku wareejinayno qalabkan. Mubarik waxa uu xusay in qalankani uu yahay mid ku kooban wiilasha oo qudha isla markaan ay ku daadaali doonaan hablahana u sameeyaan fursad ay ku heli karaan meel ay ku ciyaraan iyo qalabkii ciyaaraha.
Farxaan Aaden oo ka mid ah madaxda GAA, ayaa isaguna tilmaamay in hayadda GAA diyaar u tahay inay wax la qabato dhammaan dhallinyarada ku nool goobaha ay ka shaqayso waxaanu xusay in ciyaaruhu ay aad muhiim ugu yihiin cafimaadka.
Sidoo kale waxaa iyaduna halkaa ka hadashay Hinda Maxamed Jaamac oo ka mida madaxda Jamacada Burco, waxayna hayâ,adda GAA uga mahadnaqaday sida ay ugu soo jawaabeen codsigii ay u qorteen guddiga ardayda oo in badan isku dayey in ay helaan qalabka ciyaaraha, waxay Hinda Jaamac intaa ku dartay in muddo doora ardaydu raadinaysay qalabkan, hayâ,adaha kala duwana ka codsadeen, balse GAA ka ajiibtay codsigoodii kana heleen qalabkan.
Ugu danbayntii waxa halkaa ka hadlay ka jeediyey Axmed Maxamed Aaden oo ah Guddoomiyaha guddiga ardayda Jamacadda Burco, waxaanu uu mahadnaqay hayâ,adda GAA oo uu ku tilmaamay in ay baahi aad ah u qabeen in ay helaan qalabkan ciyaaraha,, isagoo intaa ku daray in wali ay wax badani ka dhiman yihiin, gaar ahaan dhinaca hablaha oo ay u baahan yihiin xarun ay ka heli karaan qalabka ciyaaraha fudud.
← onkod oo ku guulaysatay koobka nabada
Kulan afar-geesood ah oo maanta laysku soo hor-fadhiisinayo axsaabta siyaasadda →